Yini i-Tripod ehamba phambili ephathekayo yefoni, ikhamera ye-DSLR, i-GoPro, noma iMakrofoni? | Martech Zone
Yini i-Tripod ehamba phambili ephathekayo yefoni, ikhamera ye-DSLR, i-GoPro, noma iMakrofoni?
NgoLwesine, Februwari 22, 2018 Douglas Karr
Manje ngiphethe imishini yokulalelwayo engangiyithengile ubhaka onamasondo, isikhwama sami sezithunywa sasinzima kakhulu. Ngenkathi isikhwama sami sihleleke kahle, ngisaqhubeka nokunciphisa isisindo ngokungabi neziphindaphindo zohlobo ngalunye lwensimbi noma isesekeli engiza naso.
Olunye udaba kwaba ukuqoqwa kwama-tripods amathathu engangiwaphethe. Ngangine-tripod encane yedeskithophu, enye eyayiguquguquka, bese kuba enye eyayenzelwe i-smartphone yami kuphela. Kwakuningi kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngivivinye cishe yonke i-tripod ephathekayo emakethe - ngaze ngayihlola I-UBeesize Tripod X.
I-tripod eguquguqukayo elula futhi ephathekayo kepha inemilenze emide kakhulu engiyitholile - 12 ″. Iqinile ngokwanele ukufaka ikhamera ephelele ye-DSLR noma i-camcorder, futhi iza nenqwaba yezesekeli:
Isiqeshana Somnikazi Wefoni Yeselula se-iPhone / Ucingo lwe-Android
Ikhanda le-swivel elikhiya endaweni
I-adapter yokukhweza yeGoPro
Inkinobho yekhamera ekude ye-Bluetooth
Imilenze yomibili iyaguquguquka futhi ifakwe ingubo yenjoloba ethambile engadabuli noma ihlukane, kepha ibamba ngempela noma yini ongafisa ukuyifaka kuyo noma nxazonke. Futhi, imilenze mide ngokwanele ukuyigcina inganyakaziswa noma iwe - ngisho nekhamera esindayo kuyo.
Nginokukhulu Umbhobho we-Apogee engihamba nayo ukwenza ama-podcast emgwaqeni, kepha i-tripod yayingakaze ibe nde ngokwanele ngakho-ke ngangiyilinganisela kwezinye izincwadi - futhi yayihlala ishelela futhi ishibilika ngemilenze eyipulasitiki eyi-tripod. Le tripod ayinyakazi futhi ingivumela ukuthi ngibeke imakrofoni lapho ngiyidinga khona. Futhi njengoba ebiza cishe ama- $ 20, ngithenge okumbalwa - kwasekhaya, ehhovisi nakubhaka.
Ukudalula: Ngisebenzisa eyami Isixhumanisi sokuhambisana kwe-Amazon kulesi sihloko.
Tags: i-camcorder tripodIkhamera yedijithalii-tripod yekhamera yedijithalidslrIkhamera ye-DSLRdslr kathathui-tripod eguquguqukayoGoProi-gopro tripodI-tripod ye-iphoneImakrofoniimakrofoni kathathuifonii-tripod ephathekayoi-smartphone tripodi-tripodubeesize tripodbopha ama-tripod
Ukuchofoza ukuze ushayele kuye kwaba okubalulekile ekuphumeleleni kokukhangisa kokusesha kwasendaweni
I-Vibenomics: Okomuntu uqobo, Umculo osuselwa endaweni nokuthumela imiyalezo